အလုပ်ခွင်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း နယ်ပယ်များတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်း။ | Samfunnskunnskap.no
အလုပ်ခွင်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း နယ်ပယ်များတွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်အောင် မည်သို့အစပြှုမည်နည်း?
နော်ဝေရောက် လူသစ်တယောက်အတွက် အရာများစွာသည် အသစ်အဆန်းနှင့် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေသည်။ နိုင်ငံခြားသားအတွက်ရော ပြည်သူများအတွက်ပါ အရေးကြီးသည်မှာ သူ/သူမတို့မဖို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပုံစံတကျနေထိုင်တတ်လာပြီး တစထက်တစ နော်ဝေလူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဝင်ဆံ့နိုင်ပြီဟု ခံစားလာနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည့် အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စမှာ နော်ဝေဘာသာကိုသင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နေရာအဖုံဖုံတွင် သင်ယူနိုင်သည်။ အများစုက နော်ဝေဘာသာသင်တန်း တက်ရခြင်းကို ထိရောက်စွာအသုံးချ ကြသည်။ စကားအသုံးချခွင့်ရမည့်နေရာများကို ရှာဖွေရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အလုပ်ခွင်များ အပန်းပြေစုပေါင်းသွားလာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတို့တွင် သုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အချို့က ရုပ်မြင်သံကြားမှလွှင့်သော ကလေးကဏ္ဍ၊ သတင်းနှင့် စာတမ်ထိုး အစီအစဉ်များမှတဆင့် များစွာသင်ယူနိုင်ကြသည်။
နော်ဝေဘာသာသင်တန်းတွင် လက်တွေ့စကားသင်ယူရေးနေရာ ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ သမားရိုးကျ ကျောင်းတွင်းသင်ကြားမှုတွင် အပိုထပ်ဆောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့စကားသင်ယူရေးနေရာ တွင် အလုပ်ခွင်တခုအတွင်း နော်ဝေစကားပြောခြင်းကို လေ့ကျင့်နိုင်မည်။ လက်တွေ့စကားသင်ယူရေးနေရာ မှတဆင့် သင်တန်းသားသည် စကားသင်ယူနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပါ ရနိုင်သည်။
နော်ဝေတွင် အလုပ်ရလိုသူတဦးသည် ကိုယ်တိုင်အားတက်သရောရှိနေရမည်။ စကားသင်ယူရန်အရေးကြီးသည်၊ အဆက်အသွယ်များ ချိတ်ဆက်မိစေရန် အရေးကြီးသည်၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြှုံရှိထားရန် အရေးကြီးသည်။ အချို့က ကုမ္ပဏီ(company)များတွင် လက်တွေ့အလုပ်သင်ယူရေးနေရာ ရတတ်သည်။ လက်တွေ့အလုပ်သင်ယူရေးနေရာကို လုပ်သား/ဦးစီး (NAV) က ကြီးကြပ်စီစဉ်ပေးသည်။
အခြားနိုင်ငံတခုမှ အတတ်ပညာရခဲ့ပြီးသူများသည် မိမိပညာကို နော်ဝေနိုင်ငံတွင် အသိအမှတ်ပြှုခံရအောင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အတတ်ပညာကိုအသိအမှတ်ပြှုရေးအတွက် ပြဋ္ဌာန်းချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အသေးစိတ်ကိုwww.nokut.noတွင်လေ့လာပါ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှသာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အားတက်သရော ဝင်ဆံ့နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များ၊ အားကစားအသင်းများ၊ နိုင်ငံရေး (သို့) ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများလည်း အမြောက်အမြား ရှိပါသေးသည်။ ဤနည်းသည် အခြားသူများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးရန်၊ ဘာသာစကားအသုံးချရန် နှင့် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနှင့် ဝါသနာများကို အသုံးချခွင့်ရရန် သင့်လျော်သောနည်းလမ်းကောင်းတခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံတွက် ကလေးရှိနေသူများအတွက် အခြားသူများနှင့် ချိတ်ဆက်မိရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများပါသည်။ ကလေးများ၏ဘဝတွင် လုပ်ကိုင်စရာမျိုးစုံဖြင့်ပြည့်နှက်နေတတ်သည်။ ကလေးများနှင့်အတူ အားလပ်ချိန်သွားလာလှုပ်ရှားသွားလာမှုများတွင် ပါဝင်ရသည့်အခါ၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရာနောက် လိုက်သွားရသည့်အခါ (သို့) မိဘဆရာအသင်းအစည်းအဝေးတက်ရသည့်အခါများတွင် အခြားကလေးမိဘများနှင့် တွေ့ဆုံကြရသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံအတွင်း နေရာသစ်တခုသို့ ရွှေ့ပြောင်းရသူ နော်ဝေလူမျိုးများလည်း
နော်ဝေနိုင်ငံတွင် သင် သားသမီးများရှိသလား? ကျောင်းဆင်းပြီးချိန်တွင် သားသမီးများကို အမျိုးမျိုးသော စုပေါင်းလှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်မှုများသို့ အတူလိုက်သွားပါ။ သင့်ကလေးနောက်ကို လိုက်ပါသွားပြီး အခြားလူသစ်များနှင့် အသိအကျွမ်းဖြစ်နိုင်သည့် တိုက်ဆိုင်မှုကို အသုံးချပါ။